Kedu otu ị ga - esi ahọrọ igwe igwe igwe - nke ika dị mma?
Ụlọ Ngwa ụlọ
Kedu otu ị ga - esi ahọrọ igwe igwe igwe - ihe ị kwesịrị ịṅa ntị mgbe ị na - azụ?
Ndị na-arụ ọrụ n'oge a kwesịrị ịma otú e si ahọrọ igwe-asa maka ụlọ. Na-enweghị ngwaọrụ a, ị gaghị eche ụdị ndụ gị, ọ na-esikwa ike ịhazi ugbo gị. Ngwa a anyị zụrụ maka ọtụtụ afọ, n'ihi ya, ị kwesịrị ịma nke ọma ya, ụzọ buut, klas ike na ndị ọzọ.
Kedu ihe igwe ncha?
Ọtụtụ ndị nwunye nwunye na-achọpụta na ọ bụ naanị igwe ahụ ka ha na-asa ahụ, na-ekewa ha na ngwaọrụ nke ụdị nke a. Iji ghọta ajụjụ nke igwe igwe dị mma, nke a ezughị. Ọ na-achọsi ike n'ozuzu ya iji mara nzube nke isi ya na nkọwa ya, atụmatụ atụmatụ, ọrụ, njirimara.
Otu esi choputa igwe eji asa dika nkwekorita di iche iche:
Ike nke uwe. Ikike nke ọkọlọtọ nke igwe ndị na-asacha ụlọ bụ site n'arọ 3 n'arọ 7. Na ajụjụ nke otu esi achọ igwe igwe kachasị mma ị ga-echeba ọnụ ọgụgụ nke ndị òtù ezinụlọ gị. Ejiri ihe dị ka puku mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ zuru ezu na-erule 3.5-4.5 n'arọ, a na-agbakọkwa mkpọ maka 5-7 kg maka nnukwu ezinụlọ.
Ihe ulo obibi. Igwe anaghị agba nchara nwere ike ịdabere ma na-eje ozi ọtụtụ iri afọ. Ihe ọghọm nke automata site na ihe a - ha dị oke ọnụ ma na-akwụ ụgwọ ọrụ ha. Egwuregwu dị mma - nhọrọ kasị mma. Ọ na-arụ ọrụ ruo afọ iri abụọ na ise, dị ọnụ ala, dị irè, na-emepụta obere mkpọtụ ma ọ dịghị emepụta eletrik.
Njikọ mmiri. Ụfọdụ ụdị nwere ike jikọọ n'otu oge na kpoo na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ, nke na-ebelata mgbapụta ike, mana site na usoro a ị na-adabere na nkwụsi ike nke okpomọkụ na netwọk. Njikọ na mmiri oyi na-eme ka ọ dị mma karịa, igwe n'onwe ya na-eweta okpomọkụ na uru a chọrọ.
Ụdị njikwa. Mechanical buttons are simple and reliable. Ihe mmetụta dị oké ọnụ dị oké ọnụ, ọ na-agbaji ọtụtụ ugboro, ma ọ bụ ihe dị mfe iji.
Ụdị e wuru na-eguzo na-eguzo ọtọ. A na-etinye ụdị igwe nke mbụ n'ime kichin. Ngwurugwu niile e wuru na-eme ka ọ dị n'okpuru okpokoro ala na akụkụ nke elu nke ụdị mwepụ, enwere nhọrọ maka ịtụgide ọnụ ụzọ nke isi.
Na-asa igwe na loading
N'ọnọdụ ahụ, nke na-asa igwe ịhọrọ maka ụlọ ahụ, ọrụ a na-arụ site na ịsa ákwà na mkpọ. Ụdị ngwaọrụ ndị dị n'ihu na-arụ ọrụ karị, ọ nwere ihe mara mma ma ọ bụ ọnụ ụzọ. Enweghị uru dị iche iche nke ụdị a - achọkwu ụlọ n'ime ụlọ ahụ, ịnweghị ike itinye ihe na mkpọ ahụ mgbe ọ gbanyechara, na-ebudata ma ọ bụ na-ebugharị, onye ahụ ga-ehulata.
Na-asa igwe na drum vetikal
Na-arụ ọrụ n'ihu na igwe dị iche iche, na-eche banyere onye kacha mma ịhọrọ maka ụlọ, anyị ga-atụle ngwa ngwa nke ụlọ nke ụdị a. Ha na-etinye obere ohere, anaghị achọ ịgba agba mgbe ha na-etinye uwe, n'ihi ya, ọ ka mma maka agadi ma ọ bụ onye nwe ụlọ dị nta. Ngwaọrụ niile dị n'elu panel, nke nwere uru ya, ọ na-esiri ụmụ obere ụmụaka ike iru na nchịkwa nchịkwa.
Akụkụ nke igwe akpaka nke ụdị ihe ntanetị dị ntanetị:
elu - 85-90 cm;
obosara - 40-45 cm;
omimi - 60 cm.
N'ichebara nhọrọ dị iche iche anya, otu esi họrọ igwe igwe ịsacha, ịkwesịrị ịkọwa ngwaọrụ ndị nwere usoro ihicha . Ha nwere ihe ndị ọzọ na-ekpo ọkụ maka ikuku ikuku, nke na-agba n'ime ụlọ ọrụ ma na-etinye mmiri mmiri ka njọ. Igwe n'onwe ya na-aga n'ihu na-agagharị n'oge na-enye aka, nke na-enyere aka mezuo usoro ahụ karị. Na ngwa dị mfe, oge nchịkọta setịpụrụ site na oge, na igwe igwe akụrụngwa dị oké ọnụ, a na-eme ka njide nchịkwa na-arụ site na sensọ.
Ugboro ugboro kpatara nkwụsị nke ngwaọrụ ndị a bụ ibu arọ nke ilu ahụ, ya mere ọ dị mkpa iji nlezianya rụọ ọrụ na usoro ihicha. Ọtụtụ n'ime igwe ndị a na-arụ ọrụ a nwere nkwụsị. Ụdị Bosch na Gorenje nwetara nyocha dị mma. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na igwe ịme akwa na-ehichapụ, ị nwere ike ịhọrọ ụdị si na Blomberg ma ọ bụ Brandt.
Nlereanya nke igwe ncha igwe na ihichapu:
Samsung WD1142XVR Yukon;
Kedu otu ị ga-esi ahọrọ igwe nri dị ọcha?
Mgbe ị na-ekpebi ka ị ga - esi họrọ igwe akwa igwe, ị ga - ege ntị na akụkụ nke ngwaọrụ ahụ, klas nke ịsacha na ntụgharị , ikike nke engines arụnyere n'ime ngwaọrụ ahụ. Ọrụ ọ bụla ma ọ bụ njirimara na-emetụtakwu àgwà nke ịsacha, ogologo oge nke igwe, ike ike. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa ọkụ eletrik, gbalịa ịzụta ụdị dị elu nke "A" na "A".
Ike igwe igwe
Ike nke igwe ịsa ahụ gbanwere, ike ike dịgasị dabere na ọnọdụ. N'elu igwe akụrụngwa, a na-ebugharị ígwè motrị nke 180 W ruo 360 W ma ọ bụ motors mo 380-800 W n'ebe niile. Kemgbe afọ 2005, a na-ejikarị ụgbụ kọmpat na-ejighị ya eme ihe, jikọtara ya na drum.
Ike zuru oke nke ike ọkụ na-agụnye ọtụtụ ụkpụrụ - ike nke isi ọrụ, ikpo ọkụ, mgbapụta, sensọ nchịkwa. Ná nkezi, a na-agbakọta usoro arụmọrụ na "owu" na 60 Celsius. Ngosipụta a dị oke mkpa mgbe ọ dị mkpa ịhọrọ ezigbo automaton. Ọ bụrụ na igwe klas "A ++" na-eri ya site na 0.14 kW kwa elekere, mgbe ahụ, mmepụta ego nke klas "D" - site na 0.29 kW.
Kedu ihe kachasị mma na igwe igwe?
Ka ịhọrọ igwe ejiji site na mpaghara, ị ga-eleba anya na data paspọtụ. Nchikota nke igwe na-enye ohere ime mkpebi siri ike nke ịdị nro na iru mmiri nke uwe na njedebe nke ịsa. Dịka ọmụmaatụ, klas G kwekọrọ na mmiri 90%, na ọkwa klas A - karịa 45%. A na-enwu akwa na-adịghị ike na akwa akwa iru mmiri na ngwaọrụ F na G. Klas C, D, E - ọkwa ọkwa. Akwa arụmọrụ nke ịkpụcha na ịsacha - igwe ọrụ A na B.
Akụkụ nke igwe na-asa ahụ
Ogologo nke ọkọlọtọ arụmọrụ na-apụta site na 85-90 cm, ọ bụ nanị ihe dị mgbagwoju anya ka a na-emepụta nke dị elu nke 68 cm. Ogologo na ịdị omimi nke ngwaọrụ - njirimara nke igwe ịsa ahụ na-adabere n'ụzọ dị ukwuu n'enyefe ọnụ. E nwere ụdị data anọ dị iche iche nke ngwa ngwa ụlọ, nke dị iche na ibe ha na ogo na akụkụ ha.
Ụdị ụdị ụlọ ndị na-ehicha ahụ n'ihu ụlọ:
Ngwa kọmpat: elu - site na 68 cm, omimi - site na 43 cm, obosara - site na 47, ibu - 3 n'arọ.
Igwe akụrụngwa nke ụdị iru uhie dị nchara: elu - ruo 90 cm, omimi - site na 32 cm, obosara - 60 cm, na-ebu - ruo 4 kilo.
Ihe igwe di omimi: elu - ruo 90 cm, omimi ruo 40 cm, obosara - 60 cm, na-ebu ibu - aka 5.2 n'arọ.
Ngwá ụda zuru oke: elu na obosara - dịka dị na ụdị mbụ, mana na omimi 60 cm, na-ebu ibu - site na 5-7 kg.
Na-asacha igwe, olee ụlọ ọrụ kasị mma ịhọrọ?
Ọ bụrụ na ị na-enyocha nyochaa nke igwe igwe, nyochaa oge ọ ga-adị mfe karị. N'oge ahụ, ihe ruru 85% nke ngwaọrụ ndị a na-enweta bụ ngwaọrụ nke ụdị a. Na mbipụta a, ị ga-enyocha ụlọ ịmepụta ọtụtụ ugboro ma chọpụta nhọrọ kacha mma. Fọrọ nke nta ka ụdị nchịkọta niile na-achịkwa Bosch, LG, Samsung na Whirlpool. Ngwunye dị mma bụ Indesit, Gorenje, Candy, Hotpoint-Ariston, Zanussi, Beko, Electrolux.
Ngwaọrụ kachasị mma maka akpaaka maka afọ a dị ugbu a:
Bosch WAB 2028;
Ngwa igwe kachasị mma bụ ígwè ọrụ ntanetị maka afọ dị ugbu a:
TDLR 60210 na-agba ume;
Whirlpool AWE 60110.
Ọkpụkpụ Rotary maka motoblock
Njikere igwe maka igwekota
Nyocha maka ihe nhicha ọkụ
Nkume maka sauna
Ije ozi na tebụl
Onye na-ehicha akpụkpọ ụkwụ
Apricot mmanụ maka ntutu isi - 4 ihe ndenye maka mma na ike nke curls
Kedu otu esi eme ka onye na-afụ ụfụ?
Ịzụ nwa site na ọnwa 3
Aneurysm nke arịa ụbụrụ - oge bombu
Kedu ihe ị ga-eyi akwa jaket mmanụ ala?
Sayensi knockout, ma ọ bụ ihe mere nwoke na-esighị ike mmekọahụ abụghị ụmụ nwanyị, kama ụmụ nwoke
Scarlett Johansson na Colin Jost ezochighị mmetụta ha na njem site na New York
Nri site na ụdị ọbara
Chọọchị St. Bartholomew
Ịdị arọ na arọ nke Emilia Clark
Kedu ka ị ga-esi jiri mmerụ afọ mee ihe n'ime afọ 50?
Mbadamba nkume maka kichin
Ọnọdụ 5, ma ọ bụrụ na karịa puku okwu, ọ bara uru ikwu "ekele gị"!
Mastic maka achicha n'ụlọ
Curd onyinye - uzommeputa
Ngwá ndị omekorị - nke aka aka